"Iwayini Phantsi" kwi-Scenic Grey Highlands - I-Airbnb
"Iwayini Phantsi" kwi-Scenic Grey Highlands
Sijoyine e "Wine Down", ipropathi yethu entle ekwiindawo eziphakamileyo zeBeaver River Valley, imizuzu nje kude kuyo yonke iGeorgian Bay kunye neeBlue Mountains. Yipropathi yabucala kakhulu eyi-acre enembono engakholelekiyo yamanzi, i-escarpment kunye nezilwanyana zasendle. Yonwabela ngaphezulu kwe-1,000 sq. ft. yendawo yokuhlala ebandakanya iibhedi ze-5, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, indawo yokutyela, igumbi lokuhlala elinescreen esikhulu seTV kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo. Abamkeli bakho bahlala ngokubonwa kwinqanaba eliphambili lendlu.
Indawo yakho yokuhlala inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlala / igumbi lokutyela, amagumbi okulala ama-2 (iindawo zokulala ezi-6) kunye negumbi lokuhlambela elinamaqhekeza ama-4. Kukho indawo yokuhlala engaphezulu kwewaka leenyawo. Ligumbi elingaphantsi, kodwa uya kumangaliswa indlela eliqaqamba ngayo! Siyakwamkela ukuba wabelane ngeveranda yethu eneglasi-ngaphakathi, umgangatho ongasemva, i-BBQ, ibhafu eshushu, kunye nomgodi womlilo. Akukho ndawo yangaphandle yokungena kwindawo yakho kodwa ukuba ufunda uphononongo lwethu, uya kubona ukuba ayichaphazeli umgangatho wokuhlala kwakho nangayiphi na indlela. Mna noBob kunye nenja yethu uBrisket, siyathanda ukwabelana ngekhaya lethu, kodwa sikunika lonke ubumfihlo obukufaneleyo. Ezinye izinto eziluncedo kwisiza kukugcinwa komjikelo okhuselekileyo, i-intanethi, iA/C kunye nescreen esikhulu seTV. Yonwabela ngaphandle ngeebhayisekile zeentaba, izithuthuthu, iiselfowuni zekhephu, izihlangu zekhephu okanye ihashe! Khangela iLali eBlue, iphenyane kuMlambo iBeaver, khwela i-Old Baldy okanye uphumle nje kwi-tub yethu eshushu kwaye wonwabele imbono kunye nezilwanyana zasendle ezijikeleze ichibi elisemva kwekhaya lethu.
Amagqabantshintshi ale ndawo:
Eyona skiing ibalaseleyo eOntario ikufuphi eBlue Mountain, iLali eBlue ibandakanya ukuthenga, ukutya, iziqhushumbisi kunye nokuzonwabisa, ukonwabela iindawo zokutyela ezininzi eThornbury naseCollingwood, nyuka iBruce Trail, ukunyuka iliwa eOld Baldy & Metcalfe's Rock, intlanzi eMeaford Harbour. , yonwabela iSpandinav Spa, Wasaga Beach, Lake Eugenia, Clarksburg (AKA Artsburg), 4 wineries unique, autumn colors of the Beaver Valley, Scenic Caves, treetop zip-line, local festivals, falls fairs, Playhouses, Apple Pie Trail, Saints kunye nokhenketho lweSinners, iCraft Breweries & Ciderys, iingxangxasi ezisi-7 ezibukekayo, ukukhwela amahashe, ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela inqanawa, ukuhamba ngekhephu kunye nokutyibiliza ekhephini.
Siza kufumaneka kwalapha ukuze sikuncede ngayo nantoni na oyifunayo. Uya kuba nalo lonke ubumfihlo obunqwenelayo kodwa siyakwamkela ukuba usijoyine kwaye udibanise kwigumbi lelanga okanye kwidesika nangaliphi na ixesha lokuhlala kwakho. Indawo yakho yokuhlala ayinayo indawo yokungena yabucala kodwa ukuba ufunda uphononongo lwethu, uya kubona ukuba ayizukuchaphazela umgangatho wokuhlala kwakho nangayiphi na indlela. Mna noBob siyakuthanda ukwabelana nabanye ngekhaya lethu.
Siza kufumaneka kwalapha ukuze sikuncede ngayo nantoni na oyifunayo. Uya kuba nalo lonke ubumfihlo obunqwenelayo kodwa siyakwamkela ukuba usijoyine kwaye udibanise kwigumbi lelanga…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kimberley